Bhuku Rechipiri raSamueri 6:1-23
Areka inounzwa kuJerusarema (1-23)
Uza anobata Areka uye anourayiwa (6-8)
Mikari anoshora Dhavhidhi (16, 20-23)
6 Dhavhidhi akaunganidzazve mauto ese aiva shasha dzekurwa muIsraeri, varume 30 000. 2 Dhavhidhi nevarume vese vaaiva navo vakabva vasimuka vachienda kuBhaare-judha kuti vanotora Areka yaMwari wechokwadi kubva ikoko.+ Vanhu vanodana zita raJehovha wemauto,+ pamberi peAreka yacho, uyo akagara pachigaro cheumambo pamusoro* pemakerubhi.+ 3 Asi vakaisa Areka yaMwari wechokwadi mungoro itsva,+ kuti vaitakure kubva kuimba yaAbhinadhabhi,+ yaiva pachikomo; uye Uza naAhiyo, vanakomana vaAbhinadhabhi, vakanga vachifambisa ngoro yacho itsva. 4 Saka vakatakura Areka yaMwari wechokwadi kubva kumba kwaAbhinadhabhi pachikomo, uye Ahiyo akanga achifamba ari mberi kweAreka. 5 Dhavhidhi nevanhu vese veimba yaIsraeri vakanga vachipembera pamberi paJehovha nezviridzwa zvemhando dzese zvemuti wemujunipa, neudimbwa, nezvimwe zviridzwa zvine tambo,+ nematambureni,+ nematare, nesimbi dzinorovaniswa.+ 6 Asi pavakasvika paburiro* raNakoni, Uza akatambanudzira ruoko rwake kuAreka yaMwari wechokwadi, akaibata,+ nekuti yakanga yava kudonhedzwa nemombe. 7 Jehovha akabva atsamwira Uza zvikuru, Mwari wechokwadi akamurova+ ipapo nemhaka yekusaremekedza kwaakaita,+ uye akafira ipapo padivi peAreka yaMwari wechokwadi. 8 Asi Dhavhidhi akatsamwa nekuti Jehovha akanga aratidza hasha dzake kuna Uza; uye nzvimbo iyoyo inonzi Perezi-uza* nanhasi. 9 Saka Dhavhidhi akatya Jehovha+ pazuva iroro, uye akati: “Zvino Areka yaJehovha ichasvika kuguta rangu here?”+ 10 Dhavhidhi haana kuda kuunza Areka yaJehovha kuGuta raDhavhidhi kwaaiva.+ Asi Dhavhidhi akaita kuti iendeswe kumba kwaObhedhi-edhomu+ wekuGati. 11 Areka yaJehovha yakaramba iri kumba kwaObhedhi-edhomu wekuGati kwemwedzi mitatu, uye Jehovha akaramba achikomborera Obhedhi-edhomu neimba yake yese.+ 12 Mambo Dhavhidhi akaudzwa kuti: “Jehovha akomborera imba yaObhedhi-edhomu nezvinhu zvese zvaainazvo nemhaka yeAreka yaMwari wechokwadi.” Saka Dhavhidhi akaenda achifara chaizvo kunotora Areka yaMwari wechokwadi kumba kwaObhedhi-edhomu kuti aiunze kuGuta raDhavhidhi.+ 13 Vatakuri+ veAreka yaJehovha pavakanga vafamba nhanho 6, akabva abayira mukono wemombe neimwe mhuka yakakodzwa. 14 Dhavhidhi akanga achitamba pamberi paJehovha nesimba rake rese; nguva yese iyi Dhavhidhi akanga akapfeka efodhi* yejira.+ 15 Dhavhidhi neimba yese yaIsraeri vakanga vachiuya neAreka+ yaJehovha vachishevedzera nemufaro+ uye vachiridza hwamanda.+ 16 Asi Areka yaJehovha payakasvika muGuta raDhavhidhi, Mikari,+ mwanasikana waSauro akatarisa pasi nepahwindo, akaona Mambo Dhavhidhi achisvetuka uye achitamba pamberi paJehovha achitenderera; uye akatanga kumushora mumwoyo make.+ 17 Saka vakapinda neAreka yaJehovha vakaiisa panzvimbo yayo mutende rayakanga yadzikirwa naDhavhidhi.+ Dhavhidhi akabva apa zvibayiro zvinopiswa+ nezvibayiro zverugare+ pamberi paJehovha.+ 18 Dhavhidhi paakapedza kupa zvibayiro zvinopiswa nezvibayiro zverugare, akakomborera vanhu muzita raJehovha wemauto. 19 Uyewo akapa vaIsraeri vese, murume wese nemukadzi wese, chingwa cheraundi,* nekeke remichero yemichindwe, nekeke remazambiringa akaomeswa, vanhu vese vachibva vaenda mumwe nemumwe kumba kwake. 20 Dhavhidhi paakadzoka kuti akomborere imba yake, Mikari+ mwanasikana waSauro akabuda ndokuenda kwaari. Akati: “Inga mambo waIsraeri azvikwidziridza chaizvo paazvipfekenura nhasi pamberi pevarandasikana vevashandi vake, sekuzvipfekenura kunoita benzi pamberi pevanhu!”+ 21 Dhavhidhi akabva ati kuna Mikari: “Ndapemberera pamberi paJehovha, uyo akandisarudza panzvimbo pababa vako neimba yavo yese, uye akandigadza kuti ndive mutungamiriri wevaIsraeri,+ ivo vanhu vaJehovha. Saka ndichapemberera pamberi paJehovha, 22 uye ndichazvininipisa kutopfuura ipapo uye ini pachangu ndichatozviona semunhu akaderera. Asi varandasikana vawataura vachandikudza.” 23 Saka Mikari+ mwanasikana waSauro, haana kuva nevana kusvikira pazuva raakafa.